Repoblikan’i Afrika Afovoany : “Aza Adinoina Izahay!” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Oktobra 2013 12:22 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Nederlands, Deutsch, 繁體中文, 简体中文, 日本語, Italiano, Català, Français
Niha-nahery vaika sady nanaitra ny tsy fifandonana eo amin'ny governemantan'i Afrika Afovoany sy ny mpikomy Seleka hatramin'ny volana desambra 2012. Taorian'ny volana maro tsy nifanarahana dia nambaran'ny mpikomy Seleka fa nalainy ny lapam-panjakana misy ny filoha tamin'ny 24 Martsa 2013. Lasa nialokaloka any amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo ny filoha François Bozizé ary nanora-tena ho filohan'ny Repoblikan'i Afrika Afovoany ny mpitarika ny mpikomy, i Michel Djotodia. Maro ireo andrana hidirana nataon'ny mpikomy no tsy nahomby ary efa ofisialy ny faharavàn'ny Sekela amin'izao fotoana izao. Nefa na izany aza, dia mbola mampijaly ny any amin'ny faritra ihany, mandroba tsy misy indra-fo izay tanàna lalovany ireo mpikomy taloha.
Ireo Kirizy eo amin'ny maha-olona
Tena mahonena ny mijery ny fari-piainan'ny olona any amin'ireo faritra sasany, indrindra ny ao anatin'ny firenena. Mahatezitra ny olona ny fanararaotam-pahefana ataon'ireo mpikomy. Nitantara ny zavatra nataon'ireo mpikomy izay aseho ho toy ny ” asa fanafoanana fitaovam-piadiana any amin'olona” i Camille Mandaba [fr], mponina any Bangui :
Nampandohalehin-dry zareo aho, nampitahoriny tamin'ny fitaovam-piadiany alohan'ny handrobany ny tranoko. Ny volafotsy, ny kidoro, ny vata fahitalavitra, ny sakafo, ny telefaona, ny vata fampangatsiahana, lasany daholo ny zava-drehetra.
Vavolombelon'ny helok'ireo mpikomy taloha izay indraindray miseho ho toy ny mpitandro filaminana ihany koa ny Monsenera Nongo-Aziagbia [fr], evekan'i Bossangoa :
Natao tsinontsinona tanteraka ny hasin'ny maha-olona. Na avy tamin'ny ankilany, na ny andaniny dia samy mampihorohoro ny fanararaotam-pahefana nisy.
Ireo mpikomy any amin'ny CAR/RCA (Repoblikan'i Afrika Afovoany) avy amin'ny wikipedia CC-BY-2.0
Tena mbola feno habibiana kokoa ny fanararaotam-pahefana any ambanivohitra. Asehon'ny sary iray nalain'ny zanabolana amerikana ireo faharavanà tanàna iray manontolo :
Repoblikan'i Afrika Afovoany @ONU_RCA Tsy misy afa-tsy ireo tanànan'i Bossangoa may ihany no azon'ny zanabolana amerikana sary. Tsy misy ny momba ny LRA. [Tafika Mpanohitry ny Tompo] pic.twitter.com/htIYOYdBuD
— ewalifete (@frugalisorg) 24 Septambra 2013
Ny tatitra avy any amin'ny Human Rights Watch [fr] no milaza fa trano 1.000 no rava any amin'ny tanàna 34 farafahakeliny, tahaka ny vonomoka/an-tselika:
Nandao ny tranony ireo voalohany , ny dimy tamin'izy ireo, ary natangorona teo am-pototry ny hazo iray…. nafatotra niaraka teo amin'ny sandriny ry zareo avy eo notifirina tsirairay.
Tsy mifidy olona ny tsy fifanarahana. Eny fa na dia hatramin'ny ankizy aza dia antsoina ho ao amin'ilay vondrona mitàm-piadiana, tahaka ny asehon'ity sarinà ankizy miaramila ity :
Afrika Afovoany : Tranga mampatahotra no miseho ao amin'ny firenena, tsy ….[ voafehy ny] mpikomy Seleka – http://t.co/4XS1S5LVSQ pic.twitter.com/Il1y3Mzs9o
— Thierry Barbaut (@TBarbaut) 28 Jona 2013
Maro amin'ireo mpanara-maso no mihevitra fa hanjary ady eo amin'ny Kristiana sy ny Silamo io fifandonana io. Mitombo ny fifandolanana eo amin'ny Kristiana tsotra sy ny mpikomy, izay Silamo ny ankamaroany, nefa mihevitra ireo mpanara-maso sasany fa eo lafiny ara-toe-karena fa tsy ara-pinoana no fototry ny fifandirana. I Thierry Vircoulon, manam-pahaizana manokan'ny International Crisis Group (ICG) (Vondrona Famahana Olana Iraisam-pirenena) any Afrika Afovoany dia nilaza fa :
Tsy hanova ny mponina any Afrika Afovoany no nahatongavan'ny Seleka fa tonga mba hangalatra. Tsy misy ifandraisany amin'ny zava-niseho tany Mali izany.
Nozarainà mponina iray tsy mitonona anarana [fr] ity fijery iray ity :
Tsy nanana eritreritra ny hanangana firenena vaovao ny miaramila mpitarika ny miaramila mpikomy. Fantany fa tsy haharitra ny asany ka dia heveriny fananana babo an'ady ho azy i Bangui .
Very fanantenana ny amin'ny toe-draharaham-pirenena mampahonena i Beatrice Epaye [fr], mpikambana teo aloha tao amin'ny Parlemanta sady mpikambana ao amin'ny Mpanolotsainan'ny Tetezamita amin'izao fotoana izao :
Adino eto anivon'i Afrika izahay, na io fifandonana io aza dia adino. Ny antso ataoko dia ny tsy hanadinoana anay. Tsy tokony havela ho afaka hifamono izahay nefa dia izany sahady no zava-miseho izao.